Taona, taon-kafa… volan-kankafotra | NewsMada
Taona, taon-kafa… volan-kankafotra
Famantaran’ny Ntaolo ny fiovan’ny taona ny kankafotra. Ny fahataperan’ny ririnina hidirana amin’ny fiandohan’ny lohataona sy ny fahavaratra izany. Ny feon’ny kankafotra avo sy miverimberina ary tsy miova toy ny milaza hoe taontaon-kafa no nadikan’ny Ntaolo hoe miditra amina taona hafa indray amin’io fiovana na fizaran-taona mampaneno azy io: fidirana amin’ny taom-pambolena.
Volan-kankafotra: ny omaly, tsy miova. Tsy inona izay fa toe-javatra tsy misy fiovana ho amin’ny fandrosoana sy fihatsarana fa dodoriabe. Tsy izany ve izao fiainam-bahoaka izao? Ny taona no miova, fa tsy ny fiainana. Tsy hitondra fanambinana na oviana na oviana rahateo koa ny taona, na toy inona firarian-tsoa, raha tsy misy ny fiovana. Na fomba fanao izay, na ny atao, na ny mpanao…
Aiza ho aiza izany ankehitriny, raha tombanana amin’izao tonon-taona izao, ohatra, ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka? Volan-kankafotra: ny omaly, tsy miova. Ny eo ihany no eo: tsy misy fivoarana, tsy misy fanantenana. Tsy miova tsinona ny fomba fiasa, ny asa atao, ny mpanao ny asa… Maso miara-mahita sy sofi-miara-mandre ny rehetra amin’izay iainana isan’andro vaky.
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady sy fandrobana tany… Manginy fotsiny ny fivarotan-tanindrazana, ny fandrobana harem-pirenena… Inona no afitsoky ny mpitondra amin’izany? Tsy miova ny fomba fiasa, ny asa atao… Mandeha ho azy ny tsy fanarahan-dalàna, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kolikoly avo lenta, ny kiantranoantrano, ny raharaham-pirenena ananan-kavana…
Hisy ve ny fiovana na fanovana amin’izao taona vaovao izao, izay irariana hoe hitondra soa sy fanambinana? Mila miova ny fomba fiasa, ny asa atao, ny mpanao ny asa… Amin’ny fomba ahoana? Fandinihan-tena izao tonon-taona izao, hahalana ny hafa; fandinihana ny hafa, hahalalana ny tena. Taona itsy, itsy ny lalana; taona ity, ity ny lalana; taona iry, iry ny lalana… Sao mitaontaona na miadaladala foana?